Masayendisiti anoona kuti kutsanya kunokonzera kushandiswa kwemaini
Chemotherapy inokonzera kubhadhara zvakakomba kuhutachiona hwemuviri. Migumisiro yenyaya ino inoratidza kuti kutsanya kunogona kuderedza zvimwe zvinokuvadza zve chemotherapy. Co-Munyori Tanya Dorff (1)
Kutsanya kunobatsira kudzivirira zvirwere zvepfungwa:
Kutsanya kunoderedza ngozi yako yepfungwa uye chirwere cheshuga
Kuve nezuva risina chekudya nguva zhinji kunoderedza njodzi yako yechirwere chemoyo uye chirwere cheshuga. Zvidzidzo zvinoratidza kuti kutsanya kunoburitsa kwakakura mukuwedzera kwehomoni yekukura kwevanhu, iyo inosanganiswa nekukurumidza metabolism uye kupisa mafuta. Kubvisa mafuta kunozivikanwa kuderedza njodzi yechirwere chemoyo uye chirwere cheshuga. Vanachiremba vari kutotanga kufunga kutsanya sekurapa.
Kutsanya kunobudirira kunobata kenza mumasero evanhu:
Uye kana tikamira kudya zvishoma, nguva nenguva
1 nyowani kubva ku € 15,60
Tenga 15,60 €
kubvira pana Nyamavhuvhu 9, 2020 7:05
urongwa Kindle Ebook
Source: DOPA Nhema
Tsvaga zvinoshamisa zvinoporesa zvinhu zvezviyo mushwa zvinomwe
Nhetembo dzaMattheeu Grobli
Kutsanya kunobatsira kudzivirira kubva kuchirwere cheuropi. Kutsanya kunoderedza njodzi yako yechirwere chemoyo uye chirwere cheshuga. Kutsanya kunobata kenza mumasero emunhu.
Kutsanya kunoiswa mune zvitatu monotheistic zvitendero
Kunyangwe dzimwe mhuka dzinokurumidza kana dzichirwara
C’est maintenant que les scientifiques le découvre !?
L’islam le sait depuis 14 siècles 😅